Aluminium Diamond Tread Sheet Sheet - Shiinaha Aluminium Dheeman Tread -saareyaasha, Alaab -qeybiye
Saxanka dheemanka, oo sidoo kale loo yaqaan saxanka hubiyaha, saxan tread iyo saxanka dabaqa Durbar, waa nooc ka mid ah kaydka birta oo leh qaab joogto ah oo dheeman sare ah ama khadadka dhinac dhinac ah, iyadoo dhinaca dambe uu yahay mid aan muuqan. Saxanka dheemmanku badiyaa waa bir, bir bir ah ama aluminium.
Tilmaamaha Saxanka Hubiyaha Aluminium (Saxanka hubiyaha Aluminium, Saxanka hubinta Aluminium)
InMiisaanka oo yaraada
Assemb Isu imaatin habboon
Xanaaq/Adkeyn O, H14, H16, H18, H24, H26
MOQ 6MT cabbir kasta
Farsamadii Rolling Cold
Dhumucdiis (mm) 0.28-6.00mm
Ballaca (mm) 800-2000mm
Dhererka (mm) 800-8000mm
6061-T6 waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee loo adeegsado 6000 taxane aluminium ah. 6000 xaashida aluminium ee taxanaha ah ee la bixiyay waxaa ku jira 6061 iyo 6082 taxane. Si gaar ah, xaashida aluminium ee taxanaha ah ee 6061 waa badeecadda wakiilka ka ah taxanahan.
Iftiimin 1100 1050 3003 Aluminium Plate Checkered 3 Bar 5 bar Muraayad Sheet Aluminum Alxan
Dusha waxaa lagu xardhay hal qaab, oo leh wax -qabad wanaagsan oo wanaagsan, adayg sare, iska -caabbinta daxalka, iyo qayilo aad u fiican iyo saamaynta kale ee daaweynta dusha. Waxay leedahay faa'iidooyinka waxqabad aad u fiican, qaab cad iyo dusha nadiifka ah. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa qalabka iyo warshadaynta mashiinnada, dhismayaasha alxanka iyo beeraha u baahan xoog gaar ah.
Daawaha: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 5086, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Dhererka: 1000mm ilaa 10000mm
Marka loo eego mabda'a kala -soocidda kala duwan, waxaa jira noocyo badan oo ah alaabada aluminium ee caadiga ah.
Marka hore, dheemanka aluminium ee caadiga ah waxaa loo qaybiyaa 8 taxane daawaha aluminium sida ku cad halabuurka kiimikada;
5052 6061 6063 7075 Checkered Aluminum Aluminum Plate 0.8-300mm Dhumucda Doonyaha
Qaababka taarikada dheemanka aluminiumku wuxuu caawiyaa yaraynta halista siibashada taasoo ka dhigaysa adeegsi aad u fiican goobaha warshadaha sida jaranjarooyinka, jaranjarooyinka iyo jidadka mara.
Aluminium tread Brite plate, Aluminium tread Brite plate, Aluminum aluminium saxan hubiyahaSoo -saarayaasha xaashida dheemanka, Aluminium soo saarayaasha saxanka tuman, warshadda xaashida Aluminium, birta saxan aluminium
Guddiyada Aluminium ee Bannaanka
Noocyada darbiyada aluminiumku way kala duwan yihiin waxayna badiyaa loo qaybin karaa guddiyada derbiga aluminium ee gudaha iyo darfaha aluminium ee dibedda. Alwaaxyada aluminiumka ah waxay leeyihiin muuqaal qurxoon, sidoo kale waxay yeelan karaan shaqooyinka ka -hortagga dabka, ilaalinta hillaaca, ilaalinta kuleylka, dahaarka dhawaaqa, hawo -qaadka, hooska iyo wixii la mid ah.